ukunqoba: uMartin Vrijland
Namhlanje ekugqibeleni ukude. Unyulo zepalamente apho ungavota ukuba lixoki professional Mark Rutte (VVD), i-Dutch Obama kaYese Klaver (Green Ekhohlo), ekunene-iphiko populist Geert Wilders (PVV) kunye clique ababuthathaka ngasekhohlo nibaleka kunye nezinye intlobo eluntwini. I-Forum for Democracy (FVD) Thierry Baudet Kuyabonakala ukuba [...]
Umphumo wokunqoba kukaDonald Trump kunye noko kuza
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	21 Novemba 2016	• 68 Comments
Ngaphambili ndathetha ukuchazwa kwewebhusayithi alt-market.com ngokuphathelele ukunqoba kukaDonald Trump. Umlobi naye wachaza iBritish Brexit ngezizathu ezifanayo. Kwinqaku yakutshanje kwile sayithi, umbhali wenza ubungqina bokuthi ngaphantsi kweDonald Trump uqoqosho lwaseMerika luya kuphazamiseka kwaye le sizathu [...]
I-website alt-market.com yabikezela ukunqoba kweenyanga zeTump 5 phambi kokhetho
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	11 Novemba 2016	• 49 Comments
I-website ye-alt-market.com iqikelele ukunqoba kukaDonald Trump sele iinyanga ze-5 ngaphambi kokhetho. Lewebhusayithi iye yaxela ukuba iBrexit e-Great Britain ngaphambi kokhetho. Ngokwenza njalo, umbhali wayejonge kakhulu izikhundla zabafundi abakhulu. Nangona ndithe ndagqiba kwelokuba ndisebenzise iiveki zokuqala ze-3 zikaNovemba ukuze ndikhulule [...]
I-BREXIT yekampu inqoba, inqobe kwinkampu ye-EU!
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	24 Juni 2016	• 7 Comments
Ikampu ye-BREXIT inokuphumelela ukuvakaliswa kwe-referendum e-United Kingdom kwikampu ye-EU. Oku kungakhathaliseki ukubulawa kwamalungu ePhalamende uJo Cox kwaye nangona iimozulu ezibi zenziwe ngesikhululo se-HAARP eWales esiye safihla ngoku. Ngokwenene yonke into yaxoshwa ukuba iphoqele abantu ukuba 'bahlale'. [...]
UMax Verstappen, akukho Nciphisa phantsi, ezele igesi njengenombolo 33 eyinqoba ye-formula 1
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	16 Meyi 2016	• 8 Comments
Lapho uDobwe Bob ehlabelela khona, uPiel Verstappen wacinga ngokungafaniyo ngexesha le-1 e-Spain. UMax wayegcwele igesi! Kwaye, ngokuqinisekileyo kuyamangalisa ukuba abaqhubi ababini baseMercedes noNico Rosberg noLebas Hamilton sele bephazamisekile kwinqaba lokuqala, kodwa kufuneka wenze njalo. I-DNA inomthamo omkhulu wokukhumbula [...]
Iindwendwe ezipheleleyo: 15.927.247